ပါမောက္ခချုပ် အမှာစကား – Monywa University Of Economics
မုံရွာစီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ဟာ နိုင်ငံတော်ကအားထားရတဲ. စီးပွားရေးပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးရာ ဘူမိနက်သန်အရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တည်ထောင်သည်မှ အနှစ် (၂၀) ကာလအတွင်း အဆင်.မြင်.စီးပွားရေးပညာရှင်အမြောက်အများကိုမွေးထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးပညာရှင်များဟာလည်း နိုင်ငံတော်ရဲ. တာဝန်အသီးသီးကို ကျရာနေရာမှာ ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ တွေ.မြင်နေရပါပြီ။
မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ ပညာဆည်းပူးနေကြတဲ. ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို မှာကြားလိုတာကတော. ဝီရိယ၊ သစ္စာ၊ ဉာဏ၊ သမာဓိဆိုတဲ. စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်များရဲ. ဆောင်ပုဒ်နဲ. အညီမောင်တို.မယ်တို.ဟာ ဝီရိယရှိစွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို. လိုအပ်သလို နိုင်ငံတော်နှင်.အမိတက္ကသိုလ်အပေါ်မှာ သစ္စာစာင်.သိရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ပညာဆည်းပူးချိန်ကာလအတွင်းမှာ မိမိတို.သင်ကြားရသောဘာသာရပ်အသီးသီးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသင်ယူပြီး ဆောင်ပုဒ်နှင်.အညီ စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို. မှာကြားလိုပါတယ်။ ဒါ.အပြင် ခေတ်ကာလနှင်.အညီ အမှီလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို.လည်း မှာကြားပါရစေ။
နောင်အနာဂတ်မှာ နိုင်ငံတော်ကအားကိုးရတဲ. တည်ကြည်ဖြောင်.မတ်တဲ. စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်တဲ. အရည်အချင်းပြည်.ဝတဲ. စီးပွားရေး ပညာရှင်များဖြစ်အောင် မိမိကိုယ်တိုင်လေ.ကျင်.ပျိုးထောင်ကြပါလို.တိုက်တွန်းမှာကြားလိုပါတယ်။
Total Views 469 , and 1 views today